Adobe Social sy ny Adobe Marketing Cloud | Martech Zone
Adobe Social sy ny Adobe Marketing Cloud
Alakamisy, Desambra 13, 2012 Alakamisy, Desambra 13, 2012 Douglas Karr
Rehefa nanao ny fividianana Omniture i Adobe, dia niahiahy aho fa hiala fotsiny amin'ny Analytics Ny eo aloha sy ny vokatra dia ho very miaraka amin'ireo fitaovam-panontana. Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa maro kokoa izahay ary mahita ny tena fivorian'ny Adobe Digital Marketing Suite dia manomboka manova ny maraiko aho. Ny Test & Target dia sehatra lehibe ary ny fampidirana tsy misy fangarony sy ny fampiasana mahazatra ny Analytics dia mitaky azy io.
Manaraka izany dia ny Adobe Social. Raha mpampiasa Adobe Analytics ianao, dia tena fampiharana tsy maintsy atao ny Adobe Social.
Adobe Social dia vokatra tokana hitantanana ireo hetsika ara-barotra sosialy mifarana hatramin'ny farany - manomboka amin'ny fividianana dokam-barotra, hatramin'ny famoahana ho an'ireo mpankafy sy mpanaraka azy, fitarihana fifamatorana ary fandrefesana ny valin'ny orinasa. Izy io dia maneho tsy ny vahaolana tokana amin'ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny varotra sosialy, fa ny vokatra izay manana tombony amin'ny fampidirana azy Adobe Marketing Cloud hitondra ny fandrefesana sy ny fanatsarana fantsona marobe amin'ny fifangaroana. Avy amin'ny Blog blog.
Adobe dia mitanisa tombontsoa marobe amin'ny Adobe Social:
Asehoy ny ROI media sosialy - Mandrosoa mihoatra ny Fitiavana ary mizara amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny hetsika ara-tsosialy amin'ny metrikan'ny asa aman-draharaha ary fantaro izay fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina misy fiatraikany amin'ny fitondran-tena mividy sy ny sandan'ny marika.
Manatsara ny varotrao amin'ny fijerena farany ny mpanjifa - Mampiasà fomba fijery ara-tsosialy hahalala bebe kokoa ny asan'ny mpanjifa sy ny fironana. Ataovy manokana ny traikefa momba ny varotra hahatratra ny olona mety
miaraka amin'ny atiny mety.
Manatsara ny fahombiazan'ny fizotry ny fitantanana sosialy - Ampiasao ny rafi-piasa miasa eo amin'ny sehatry ny orinasa hampidirana mpijery eran'izao tontolo izao ary hamaly ny resaky ny mpanjifa eo an-toerana raha mandanjalanja ny fifehezana sy ny fitantanana governemanta manerana ny fikambanana.
Tags: suite marketing nomerika adobeadobe sosialyfanadihadiana amin'ny media sosialy
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny varotra sosialy